May 2016 - Vanoda Zvinhu
Posted on May 23 Mar 01
Ndainge ndakarambana nemurume wangu asi tainge tine vana 3 vese vainge vakura vaitova kuprimary school. kunyangwe tainge takasiyana hedu chinhu chataizama kuita kushanda tese kuti vanhu vedu vakure vachiziva kuti vabereki vedu vanotida saka taipota tichiita tuma family outing zvekuti vana vedu vazive kuti kunyangwe tisingagare tese but…
Posted on May 18 Mar 01
Veduwee chihure chakangozvipengerwa hacho, handingati ndiri hure per say, I was married to my one and only husband for 16 years. After I was caught, i realised that munhu wese aneka trace kana kuti ka We were all going to school to attain higher qualifications. We had planned…
Posted on May 17 Mar 01
Ndaigara muKadoma apa ndainge ndichangotanga kugara ndega graft ndaiva naro zvinhu zvanga zvisati zvakunetsa munyika yedu.Ndainge ndava nemwedzi muviri ndichigara pamba apa ndokutozivana nevanhu vazhinji vemuraini asi ndaingovawo munhu akazvinyararira ndisingatsvage zvakawanda. Mumwe musi ndichibva kubasa ndakasvika ndiwane panext door pakazara mota panze ndokubva ndapfuurira kuyenda pamba pandaigara…
Posted on May 12 Mar 01
Mazuvano vazhinji vedu tsika kwakungotaura chete asi vanhu havachakoshese kuti mukadzi watsano ndiambuya. Ndaigara kuZambia nemukadzi wangu nevana vedu 2, one morning ndakanzwa mukadzi wangu achiti hanzvadzi yake yafona ichiti mukadzi wake arikuuya kuZambia for a couple of days and she wanted pekurara.Ndakangoti its fine ko ndaiswera ndisipo…
Posted on May 11 Mar 01
Life is full of surprises zvekuti dzimwe nguva unoshaya kuti zvirikufamba sei. Ndiri mumwe wevanhu vakabva kuZim kudhara ndinogara zvangu ku Kyalami Estate, kanzvimbo kari quiet apa kakazara varungu. Mumwe musi ndichibva hangu kubasa ndakaita kaminor accident but mota yakabva yaita ma1 zvekuti ndainge ndakushandisa mataxi, problem yaizovapo…
Ndakanga ndakagara hangu pabar pachibva pasvika mumwe mukomana ainge ari handsome apa akasimba kunge anoita workout everyday. Akanditi ndikutengere drink here ndichibva ndati as long as usingazode kundisvirira drink iyoyo please, go ahead, takabva taseka hedu.Mukomana uyu akati anonzi Tim aigara around nebrother yake Tom vese vainge vasati…
Posted on May 10 Mar 01
Ndakazvamburwa nemboro nasupervisor mufridge yekubasa
Nyaya yangu yakaitika ndayenda kuSA kunotsvaga basa ndokubva ndariwana muneimwe restaurant muPretoria. Yainge iri Monday and always this day raigara riri quiet zvekuti manager ndipo paaiyenda paOff and most of the staff taishanda tiri 3 waiters,supervisor nekitchen staff yese saka mostly taicleaner hedu. Pandakasvika ndakaona ndanyorerwa duty rekuti…
Posted on May 09 Mar 01
Ndakasvirwa nefudza mombe ndayenda kumusha ndikabva ndakanganwa kuti ndakaroorwa!
Yedu yekuda kuroorwa iyi, ndainge ndaroorwa nemumwe business men wemuHarare apa ndainge ndakakurira mutown. Murume wangu mari ayinge ayinayo zvekuti zvese zvandaida andipa zvese I even had driver wangu anondiyendesa kwese kwandinoda not kuti handigone kudriver asi ndaitova nayo yangu drivers licence asi ayingoti handidi kuti ufambe wega.…
Posted on May 09 Mar 04
Kusejusiwa neWorkmate yangu Janet, apa ranga riri bullet!
Tainge takutoziva kuti vazhinji vedu musi uyu taishanda mboro dzakamira nekupfeka kwaiyita vasikana vekubasa kwedu.Janet ainge ane mazamu mahombe zvekuti chero chainge akapfeka mboro yaitomira chete. Musi uyu Janet akauya akapfeka tracksuit Adidas yainge yakabata pese, beche rake taitowoneka kudhinda pamberi pese rakaita V zvekuti murume wese akaswera…
Posted on May 09 Apr 14
Kutsvaga mari kunomboita kuti munhu ashaye kana nguva yekuzorora kana kutandara nevamwe. Pamba pandairoja ndaingoona landlord kupera kwemwedzi chete apa girlfriend pese paaifona ndaingoti ndiri kubasa zvekuti ndakazongoona munhu akusafona ndikaziva kuti pano ndatorambwa pano.Ndakazoti ndakumutsvaga zvikanzi aaah sha inini I moved on nekuti handikwanise kumirira munhu asingagone…